Jamelgo: inona no dikan'izany, inona ny fampiasana sy mitovy hevitra aminy. | Soavaly Noti
Jamelgo: inona no dikan'izany sy ny fampiasana azy
Jenny monge | | sakafo, soavaly
Ao amin'ny lahatsoratra anio andao hiresaka ilay teny hoe "jamelgo". Nandritra ny lahatsoratra maro dia nanazava izahay ary nianatra voambolana izay mihatra amin'ny soavaly ary indraindray mety hiteraka korontana. Misy teny toa ilay hodinihintsika izay mamaritra biby tsy dia tsara, ary zavatra azo ialana izany. Na dia eo amin'ny tontolo colloquial dia tsy mila miresaka zavatra manimba.
Hitanay ve izay tondroin'io voambolana io?
1 Famaritana ny Jamelgo
2 Fampiasana ny teny
3 Jamelgo amin'ny literatiora
4 Mitovy hevitra amin'ny Jamelgo
4.2 Matalón na matalona
5 Teny hafa avy any amin'ny tontolo Equine izay mety hahaliana anao
Famaritana ny Jamelgo
Araka ny rakibolana ao amin'ny Royal Spanish Academy, ny teny jamelgo dia manondro a soavaly mijery bandy, mahia mahia ary ratsy endrika. Izany rehetra izany dia vokatry ny tsy fahanana ara-dalàna ny biby.
Ny teny hoe jamelgo dia avy amin'ny teny latinina hoe "famelicus" ary ny dikany dia azontsika vinavinaina, tsy isalasalana, noho ny teny iray hafa nalaina avy tao aminy izay azontsika tamin'ny teny espaniola: famélico. Adjectif izay ampiasaina hilazana olona na amin'ity tranga ity dia biby misy mariky ny hanoanana toy ny mahia mahia loatra.
Fampiasana ny teny
Jamelgo dia matetika ampiasaina amin'ny fomba manambany na rehefa misy fahatokisan-tena be, amin'ny fomba mahazatra, rehefa miresaka Equine. Amin'ny tranga farany, ny biby dia tsy voatery ho ratsy tarehy araka ny tondroin'io teny io.
Raisinay ity lahatsoratra ity mba hahatsiarovanay ny maha-zava-dehibe ny fikarakarantsika ny biby sy ny tsy hahatongavan'izy ireo amin'ity toe-tsakafo tsy fanjarian-tsakafo ity, zavatra iray izay mihoatra ny hanoanana na noana. Ny tsy fanjarian-tsakafo dia miteraka fahasarotana maro amin'ny taova ary koa amin'ny fahaiza-manao iza no mijaly azy. Noho izany ny biby mosarena dia hanana olana amin'ny fivezivezena sy ny fifantohana.
Tokony ho fantatsika izany Rehefa mahazo biby dia lasa andraikitsika izany ary tsy maintsy omentsika azy ny saina sy fikarakarana ilainy araka ny karazany, ny firazanany, ny asany ary ny toe-javatra misy azy.
Noho izany dia ilaina ny mamantatra momba ny sakafo sy vitamina sy otrikaina tena ilaina izany dia tsy maintsy hananan'ny biby fiompintsika ara-pahasalamana.
Jamelgo amin'ny literatiora
Mandritra ny literatiora dia azonao atao ny mahita ny tarehin-tsoratra izay nofaritana tamin'ny teny hoe mosarena sy manokana kokoa, soavaly voafaritra na resahina amin'ny teny jamelgo. Amin'ireo tarehin-tsoratra rehetra ireo dia hanasongadinana sy hanome ohatra iray ho an'ny olona iray fanta-daza isika: Rocinante, soavaly malaza an'i Don Quixote de la Mancha. Inona koa, ny tena an'ity Equine ity dia avy amin'ny filalaovana miaraka amin'ny synonyônan'ny nag: nag. Raha naneho ny heviny tsara i Miguel de Cervantes tamin'ity sombin-tantara ity: «Tonga niantso azy hoe Rocinante izy, anarana iray araka ny heviny avo, sonorous ary manan-danja tamin'ny naha-izy azy fony izy rocín, talohan'ny naha-izy azy ankehitriny [...]".
Rocinante, soavalin'i Don Quixote
Mitovy hevitra amin'ny Jamelgo
Toy ny amin'ny teny maro, 'jamelgo' dia manana maromaro mitovy hevitra azo ampiasaina amin'ny heviny mitovyAnisan'ireny, angamba ny tena ilaina na be mpampiasa indrindra dia ireto manaraka ireto:
Raha miresaka soavaly kely, dia midika izany fa malemy paika ary heverina ho soavaly ratsy mihitsy aza. Ity teny ity dia avy amin'ny teny hoe 'nangka'.
Matalón na matalona
Mahia, feno vono, feno famonoana. Ny famonoana dia maratra na koa mety ratra, izay vokarin'ny fikosehana mitohy sy miverimberina na kapoka. Amin'ny soavaly dia karazana ratra izay avy amin'ny fikosehana ny rig.
Izy io dia mety manondro zavamaniry, olona na soavaly. Fa ny mifantoka amin'ny zavatra farany mahaliana antsika dia miresaka soavaly mahia sy ratsy tarehy.
Ity teny ity dia ampiasaina amin'ny dikany roa amin'ny tontolon'ny Equine. Amin'ny lafiny iray hanondroana ny soavaly miasa. Etsy ankilany, manondro azy io soavaly kely, avo lenta ary heverina ho ratsy karazana. Ampiasaina amin'ny soavaly manana endrika ratsy ihany koa izy io, efa antitra ary hita fa niasa be izy io, ka lasa nalemy sy malazo. Aleo tadidio i Rocinante izay noresahintsika fotoana vitsy lasa izay.
Ny ankamaroan'ireo teny hitanay ireo dia ampiasaina amin'ny endrika manesoeso sy manesoeso na amin'ny tontolo kolokoloaly hilazana soavaly.
Teny hafa avy any amin'ny tontolo Equine izay mety hahaliana anao
Hay teny isan-karazany ampiharina amin'ny fitoviana ary azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa arakaraka ny fomban-drazana am-bava isaky ny faritra. Ny sasany amin'ireto teny ireto dia efa noresahina tato amin'ity pejy ity, toy ny:
Ireo teny Misioka aho ary mandoko mitovy amin'ny karazana palitao hita izy ireo, saingy miankina amin'ny faritra jeografika ny iray na ny teny hafa ampiasaina ary na dia any amin'ny faritra sasany aza dia manavaka kely kely eo amin'ireo teny roa ireo izy ireo.
Niresaka momba ny terminolojia koa izahay pony, soavaly ary soavaly ary izay faritan'izy ireo.
Raha liana amin'ny voambolana ireo ianao dia aza misalasala mamaky ireo lahatsoratra ananantsika momba ireo fitoviana resahina ao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Jamelgo: inona no dikan'izany sy ny fampiasana azy
Ny karazana soavaly tsara indrindra